Isbitaaladii Magaalada Xalab Oo La Burburiyey & Gurmadkii Caafimaadka Ee Magaalada Oo La Hakiyey. – Bogga Calamada.com
Isbitaaladii Magaalada Xalab Oo La Burburiyey & Gurmadkii Caafimaadka Ee Magaalada Oo La Hakiyey.
Wariyeyaasha iyo kooxaha firfircoon ee ka soo waramaya suuriya ayaa sheegaya in duqeymaha xagga cirka ah, baraamiisha qaraxyada iyo madaafiicda goobta ay si daran maalintii shanaad ugu hoobanayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada, Islamarkaana maalintii shaley la duqeeyey dhismayaal dhowr ah oo ay ku jiraan isbitaaladii ugu dambeeyey ee u shaqeeynayey bulshada.
Ugu yaraan 60 ruux ayaa la xaqiijiyey in shaley oo kaliya ay dhinteen, tiro intaas ka badana ay dhaawacmeen ka dib markii diyaaradaha nidaamka iyo kuwa ruushka ay si isku mid ah u garaaceen xaafadaha bari ee magaalada.
Heyâ€™adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda insaanka ayaa sheegay inay shaqadii hakad geliyeen inta badan Isbitaallada kuyaalla Xaafadaha ay Kacdoon wadayaashu ka taliyaan ee magaalada Xalab, kadib markii Isbitaallada iyo goobaha Caafimaadka ay hadaf joogto ah u noqdeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa Nidaamka Nuseyriga.
Qoraal ay soo saartay hayâ€™adda WHO, ee taabacsan waxa loogu yeero Qaramada Midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in Shantii maalmood ee lasoo dhaafay ayÂ Isbitaallada kuyaalla magaalada Xalab joojiyeen inay adeeg caafimaad u fidiyaan dadka bukaanka iyo kuwa kusoo dhaawacma dagaallada, taas oo sabab u ah duqeymaha aan kala joogsiga laheyn ee ku socda magaalada.
Wariyeyaasha soo gudbiya dhacdooyinka Suuriya ayaa soo sheegaya in dhamaan isbitaaladii la burburiyey ama la wax yeeleeyey, islamarkaana aysan jirin wax isbitaallo ah oo ku yaalla bariga mgaalada oo ka bad-baaday duqeynta Nidaamka.
Xaafadaha bari ee magaalada oo ah meesha ugu daran ee ay ka socdaan duqeymaha waxaa maamula xoogaga mujaahidiinta iyo kooxaha kacdoon wadayaasha.
Saraakiil ka tirsan Kooxaha Kacdoonka ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka ee Reuters in Shacabka ku dhaqan magaalada Xalab ay saameynta ugu daran ku yeelaneyso shaqa joojinta ay sameeyeen Isbitaalladii ku yaallay magaalada, waxayna tilmaameen in beegsashada diyaaradaha Ruushka ee goobaha Caafimaadka ay sii adkeysayÂ xaaladdii cakirneyd ee horey uga jirtay magaaladaasi.
Duqeymaha lagu hayo goobaha Caafimaadka waxaa sii dheer dawo yari ka jirta magaalada Xalab, iyadoona Xaafadaha dhaca bariga magaaladaasi uu saaran yahay goâ€™doon adag oo todobaaadyo ka hor ay kusoo rogeen Ciidamada Bashaar Al-Asad.
Nin lagu magacaabo DR Axmad Mbayed oo ah dhaqtar Canadian ah oo ka shaqeeya hayâ€™ad ka howlgasha suuriya ayaa isna Tv-ga AlJazeera u sheegay in dadku ay noqdeen kuwo rajo beel ah, islamarkaana ay hadda waayeen adeegii ugu muhiimsanaa, uguna aa-saasi sanaa ee nolosha kaas oo ah caafimaadka, wuxuuna xusay in hadda ay dadku quusteen oo ay noqdeen kuwo rajo beel ah maadama duqeyntu ay joogto tahay, goobihii caafimaadkana la burburiyey.
Magaalada Xalab oo waqti ahaan jirtay caasimada ganacsiga ee dalka Suuriya ayaa hadda noqotay magaallo gabi ahaanba burbursan, waxayna tan iyo sanadkii 2012-kii u kala qeybsaneed nidaamka Al-Asad iyo xoogaga ka soo horjeeda.
Magaalada xaafadaheeda bari waxaa ku sugan mujaahidiinta iyo kooxaha kacdoon wadayaasha, halka xaafadaha galbeedna ay ku weli ku jirto gacanta nidaamka Nuseyriga ee Al-Asad.